FIJOROANA VAVOLOMBELONA I
Mpitandrina FPVM AMBOASARY
Ny niantsoan’Andriamanitra ahy hanompo Azy
Tany ho any amin’ny taona 1988 tany ho any aho no nisehoan-javatra tahaka izao teo amin’ny fiainako.
Natory aho ny alina dia nahita fahitana toy izao:
Maty ny tenako ka nisy vatana iray nivoaka avy tao amin’ilay vatana maty iny, zany hoe: lasa vatana roa izany ny tenako, ka ny iray maty ary ny iray velona. Ny vatana iray maty moa dia hitako nofonosin’ny fianakaviko lamba, nisy antsoantson-dranomaso teo am-pamonosana ny faty. Ary dia nampidirina tao an-trano iny faty iny.
Ny vatana iray kosa dia nitazana teny lavidavitra teny tokony ho 40m teo ho eo nitazana ny zava-nisy teo. Nisy olona nitsangana teo anilako ka niteny tamiko hoe: efa maty iny vatana iray iny fa ity vatanao iray ity kosa tsy mba maty, jereo tsara hoy Izy fa mitovy ihany na iny maty iny na io ianao velona io, ka izao tonga Aho haka anao, ka ndao manaraha Ahy ianao. Dia lasa nizotra nianatsimo izahay roa.
Tsy lasa lavitra akory izahay fa tokony ho nandeha 1km teo ho eo dia niakatra vohitra iray. Tao an-tampon-tendrombohitra nisy lalana mahitsy avy any amin’ny vodi-lanitra antsinanana ka hatrany andrefana tokony ho 5m eo ho eo ny sakan’io lalana io, dia lasa nizotra niankan-drefana ny dianay, raha vao nanitsaka io lalana io izahay dia naheno antsoantso mafy tokony ho 70 ka hatramin’ny 100km eo ho eo miantsoantso famonjena antsoantson-dranomaso, rehefa nandeha izahay dia teo amin’ilay toerana nisy ireo olona tsy tambo isaina anarivony tapitrisa miantso famonjena (mila vonjy). Ny efa very ao amin’io toerana io efa be dia be, ny olona mbola ho any koa mbola be dia be satria nisy filaharan’olona tsy hita farany mbola mitanjozotra hiditra ao. Misy takela-by tokony ho 5m ny halavany sy 3m ny sakany ary eo ho eo amin’ny 15cm eo ho eo ny atevenany io, hitako misy afo tena mitanontanona tokoa eo ambanin’io takela-by io misy olona 4 ep amin’ny zorony 4, ka ireoo olona milahatra mitanjozotra ireo dia tsy maintsy mitaingina (matory) ary mivadibadika avy any avaratra ka atreny atsimo, dia mankany amin’ireo olona efa mijaly marobe ireo, raha vao vantany vao manendry io vy misy afo io ilay olana dia manomboka miantsoantso.tokony teo amin’ny 30mn teo ho eo aho no nijery teo, dia efa an-jatony ny olona mankany amin’ny fahaverezana. Nisy olona fantatro 2 tamin’ireo olona very ireo.
Dia izao no tenin’ilay olona niaraka tamiko:" be dia be hoy izy ny olona very aty, nohon’ny fampianaran-diso any ambonin’ny tany any, ka ianao dia mbola haverina any ambon’ny tany hampianatra Soratra Masina any".
Dia nametra-panontaniana aho nanao hoe: inona no mampikiakiaka ireo olona ireo? Dia hoy Izy tamiko: tahakan’ny voakaikitry ny maingoka ny tenan’ireo olona ireo ary ny nifin’izy ireo dia marary avokoa.
Dia hoy Izy tamiko hoe: aza mandinika ela an’ireo ianao fa andao manaraha Ahy dia nandeha izahay nizotra nianatsimo rehefa tonga teny atsimo lavitra tokony ho 5km teo ho eo izahay dia nahita tamboho tokony ho 3m ny haavony io tamboho io.
Dia hoy Izy tamiko, mahavita mihanika io tamboho io ve ianao? Hafakao ve io? Dia hoy aho eny tompoko. Dia nihanika aho ary tao ambadika io tamboho io nisy olona faly dia faly tsy mba manana olana. Raha ny fahitako azy dia olona mitovy endrika avokoa mitovy fitafy mitovy ahavo. Tsy misy ankizy, tsy misy olona antitra tao. Raha vao nahita ahy tonga teo ambony tamboho ireo dia faly dia faly tokoa ka nanao hoe; tongasoa aty ianao ry rahalahy niezaka ny hiditra tao aho kanjo nisontonin’ilay olona niaraka tamiko taty ivelany. Tezitra dia tezitra taminy aho, tena nisafoaka taminy mihtsy, kanefa teny malefaka sy teny feno fitiavana no namalihany ahy nano hoe: Tianao angaha ny hipetraka ao? Dia namaly Azy aho nanao hoe ENY dia hoy Izy tamiko, mbola hipetraka ao ihany ianao, tsy tsaroanao angaha ny teniko taminao hoe: mbola hiverina any ambonin’ny tany ianao hampianatra Soratra Masina any.
Te ahita an’i Jesosy ve ianao? Dia hoy izaho aiza moa no misy Azy? Dia hoy izy tamiko hoe: ERY no misy Azy dia nanondro tany ny tanany. Lavitra tokony ho 150km any ho any fa TSY laitran’ny maso ho jerena ny hazavana avy ao. Tsy mbola mazava iny masoandro iny raha ny fahazavany no jerena (tsy laitran’ny maso) dia nizotra ho any izahay raha vantany vao nandeha 40 na 35m teo ho eo izahay dia hoy ilay olona niaraka tamiko: Andao ianao haverina any ambonin’ny tany fa mbola ahita Azy ihany ianao indray andro any: marihako etoana fa ireo fotoana nijanonako tany ireo dia telovolana katroka no nikotiako azy.
Dia namaly aho nanao hoe efa telo volana anie izay no efa nijanonako taty ka ahoana ny amin’ny vatako efa maty efa lo iny? Ahoana ihany koa ny hivoahana avy ao am-pasana?
Dia natositosiny aho, dia nesesiny teny alohany aho fa Izy kosa nanaraka ahy avy tao aoriana, rehefa nandeha izahay dia nahatazana ny fasan-drazanay. Kanjo nisy rano be teo anelanelany sy ny fasana. Rano tena madio dia madio tokoa tokony ho 50m ny sakany eo am-bonin’ny lohalika ny halaliny, rehefa tonga toe afovoann’ny rano aho dia nazerany tao anaty rano dia iny izaho avy tao anaty rano sempotra iny dia nipoitra avy tao aho ka dia taitra avy tao am-pandriako.
Tsapako nanomboka teo dia tsy nijanona mihitsy ny antson’ny Tompo, naniraka ahy hitory ny Filazantsara: ny alina rehefa matory iny dia misy mazava e ao an-trano, ary misy tahaka ny rahona mijoro eo afovoan’ny tranonay misy olona ao anatin’io rahona io maniraka ahy hitory ny tenin’Andriamanitra. Rehefa lasa iny dia mangovitra sy mahatsiaro tena ho tena malemy dia malemy aho rehefa avy eo. Dia nitarika ahy hisotro toaka io fiantsoana ahy io satria natahotra indrindra ny hanao izany asa fitoriana ny Tenin’Andriamanitra izany ny tenako, fa tsy manaiky mihitsy Jesosy Tompo satria 15 taona taty aoriana aho vao nanapa-KEVITRA tanteraka, ny taona 2003 aho vao nanaiky. Dia izao aho manao ny asan’Andriamanitra izao, mahatsapa aho ankehitriny fa miaraka amiko isan’andro isan’andro ny Tompo Jesosy.
Voninahitra anie ho amin’ny anaran’ny Tompo Jesosy. Amen!
1. ANDRIANILAINA RABARIJAONA FANJATIANA TOLOTRA | 16/02/2011
MOMBA ANAO JESOSY